Uncategorized – Thutastar
စစ်ကိုင်းတိုင်း မုံရွာ သာစည်နယ် မယ် ဦးဘိုးရှိဆို ခုထိ သိနေကြတုန်း နာမယ်ကြီးတုန်း … စံပြ ပြောဆိုနေရတုန်း …. အဘယ်သို့ကြောင့်ဆိုတော် ဦးဘိုးရှိတွင် စားရင်းရှိ မယား ၃၃ ယောက်ရှိသည် …( ဖီးလင်း အားကျ ) …ဤကား စကားချပ် ဦးဘိုးရှိက လယ် ဧက သောင်းချီ ပိုင်သည်ဆိုသည် ..တနှစ်တနှစ် သီးစားချသည်ရော .. လယ်သူရင်းဌားများရော ရာသီပေါ်ချိန် ဆို မိသားစုလိုက် လာကန်တော့ ရသည် .. ထိုအချိန် တွင် သမီးပျို ချောချော မောမော ပါလာပါက.. ဦးဘိုးရှိ သဘောကျလို့ ထားခဲ့ဆိုလျင် ထားခဲ့ပေဘဲ… မထားခဲ့လို့ကတော့ နောက်နှစ်သူ့လယ်မှာ အလုပ်မရဘူးသာမှတ် … အဲ့လို …
သူသေတော့မယ်ဆိုတာ ကြိုသိနေတဲ့ သန်းကြွယ်သူဌေး ဆရာဝန်တစ်ယောက်ရဲ့ ထူဆန်းတဲ့ လုပ်ရပ် သေမယ်ဆိုတာ ကြိုသိတဲ့အခါ မျက်နှာအလှပြုပြင်ခွဲစိတ်ကုဆရာဝန် ဒေါက်တာ ရစ်ချတ်ဟာ အသက် ၄၀အရွယ်၊ သန်းကြွယ်သူဌေး တဦးဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ နောက်ဆုံးအဆင့် အဆုတ်ကင်ဆာဖြစ်ပွားနေကြောင်း သိရပြီးနောက် သူ့ရဲ့ဘ၀အကြောင်းကို ၁၉.၀၁.၁၂ နေ့မှာ သွားဆေးတက္ကသိုလ် ပထမနှစ်ကျောင်းသားများရှေ့မှာ ကိုယ်ကျိုးမငှဲ့ပဲ လူအများအတွက် တွေ့ဆုံပြောပြခဲ့ပါတယ်။ မင်္ဂလာ နံနက်ခင်းပါ။ ကျွန်တော့်အသံက နဲနဲသြနေတော့ သည်းခံပေးပါခင်ဗျာ။ ကျွန်တော်ကတော့ ရစ်ချတ်ပါ။ ဆရာဝန်ပါ။ ကျွန်တော့်ဘ၀အကြောင်း နဲနဲဝေမျှချင်ပါတယ်။ ပါမောက္ခက ကျွန်တော့်ကို ဖိတ်လို့လာရတာ ၀မ်းသာပါတယ်။ ခင်ဗျားတို့သင်ကြားနေတဲ့ သွားဆေးကုသရေးဆိုင်ရာများအပြင် တခြားအရာတွေရှိသေးတယ်ဆိုတာ တွေးမိတယ်ဆိုရင်ဖြင့် ပြောပြရကျိုးနပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ငယ်ငယ်ကတည်းက ကျွန်တော်က ဒီနေ့လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းစစ်စစ်ပါ။ အထိုက်အလျောက်အောင်မြင်တဲ့ ထုတ်ကုန်ပေါ့ခင်ဗျာ။ ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ ဆင်းရဲတယ်ခင်ဗျ။
မြန်မာအိုင်ဒေါမှာ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်နေတဲ့ ချမ်းမြေ့မောင်ချိုရဲ့ အမေဖြစ်သူ မအိကတော့ သမီးက စကားပြောလေးက မာဆက်ဆက်ဆိုပေမယ့် စိတ်ရင်းမှန်တဲ့အကြောင်း ပြောလာပါတယ်။ မြန်မာအိုင်ဒေါ ပြိုင်ပွဲဝင်တွေအကြား လူစိတ်ဝင်စားခံရမှု အများဆုံးဖြစ်နေတဲ့ ချမ်းမြေ့မောင်ချို့က စကားပြောတစ်ချို့ကြောင့် ပရိတ်သတ်အချို့က ဝေဖန်နေကြတာ ရှိပါတယ်။ ဒီအပေါ်မှာ “စကားပြောရင် မာဆက်ဆက်ဆိုပေမယ့် သူကလုံးဝ ကလေးပဲ ဘာအရောင်မှမရှိဘူး။ စကားလေး မပြောတတ်တာပေါ့နော်။ သူ့ရဲ့စိတ်ရင်းအမှန်ကတော့ တကယ်ပဲ စိတ်ရင်းအမှန်နဲ့ပဲ ပြောလိုက်တာပါ” ဆိုပြီး ပြောလာတာပါ။ ချမ်းမြေ့မောင်ချိုက သူ့ကိုမကြိုက်ရင် မဲပေးကြပါနဲ့လို့ ပြောခဲ့တာကြောင့် ပရိတ်သတ်အချို့ချေတယ်လို့ ဝေဖန်ခဲ့ကြပါတယ်။ Credit; PannPwint ============================ မနျမာအိုငျဒေါမှာ ပါဝငျယှဉျပွိုငျနတေဲ့ ခမျြးမွမေ့ောငျခြိုရဲ့ အမဖွေဈသူ မအိကတော့ သမီးက စကားပွောလေးက မာဆကျဆကျဆိုပမေယျ့ စိတျရငျးမှနျတဲ့အကွောငျး ပွောလာပါတယျ။ မွနျမာအိုငျဒေါ ပွိုငျပှဲဝငျတှအေကွား လူစိတျဝငျစားခံရမှု
ဒီလိုအဖြစ်မျိုးတွေ မကြုံရလေအောင် လမ်းသွားရင် အသိ၊သတိနဲ့ယှဉ်ပြီး သွားစေလိုပါတယ်.. ဒီနေ့ ကြုံခဲ့ရတဲ့ အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကို ကိုယ့်လိုမျိုး မဖြစ်ရအောင် သူငယ်ချင်းတွေကို သတိပေးချင်လို့ ပြောပြချင်ပါတယ်….. ဒီနေ့ သင်တန်းက စာမေးပွဲစောစောဖြေပြီးလို့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ မုန့်တီသွားသောက်ပြီး စောနေလို့ ယောက္ခမအိမ်သွားမလို့ဆို ရေကျော်ဘက်ကို ထွက်လာခဲ့တာ ဇာတ်လမ်းက အဲ့မှာစတာပါပဲ…. ၄၇ လမ်းထိပ်က Excellent မှာ အိမ်က သမီးအတွက်ရော၊ ယောက္ခမအိမ်က ကလေးတွေအတွက်ရော အသားချောင်းဝယ်မလို့ဆို ကားလမ်းကူးအပြီး ပလက်ဖောင်းပေါ်အတက် အရှေ့တည့်တည့်ကနေ ကောင်မလေး ၂ ယောက် လာနေတာတွေ့လိုက်ပေမယ့် ကိုယ့်အာရုံနဲ့ကိုယ်မို့ အမှတ်တမဲ့ဖြစ်နေတဲ့အချိန် “ဟာ သူငယ်ချင်း မတွေ့တာကြာပီ နေကောင်းလား”ဆို ခုနက ရှေ့တည့်တည့်က ကောင်မလေး ၂ ယောက်က မျက်နှာချင်းဆိုင်ကနေ ကျွန်မလက် တစ်ဖက်တစ်ချက်ကိုလှမ်းချိတ်ပြီး နှုတ်ဆက်လိုက်တော့
အနုပညာလောကရဲ့ ထိပ်တန်းရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်တွေဖြစ်ကြသလို ပရိသတ်တွေအားကျရတဲ့ မိသားစုဘဝလေးကိုလည်း ပိုင်ဆိုင်ထားကြတဲ့ တီတီနဲ့ အူဝဲတို့ မိသားစုလေးကတော့ ပြင်ဦးလွင်မြို့ကို ရောက်ရှိလို့နေပါတယ် ပရိသတ်ကြီးရေ။ မကြာခင်ကမှ ခရီးကနေပြန်ရောက်လာတဲ့ အူဝဲနဲ့ ကလေးနှစ်ယောက်ကတော့ ပြေတီဦးရိုက်ကွင်းရှိတဲ့ ပြင်ဦးလွင်ကိုလိုက်လာကြတာဖြစ်ပြီး ပြေတီဦးကတော့ “အသဲ နှလုံးတွေ ကျောက်ကပ်တွေ ကလီစာတွေ လိုက်လာကြတော့မှပဲ ဖေဖေလည်း စိုပြေသွားတော့တယ် ကွယ်…” ဆိုပြီး ရေးသားထားပါတယ်။ ဒီနေ့မနက်ပိုင်းမှာတော့ ဦးတီရှုတင်ပြီးသွားလို့ မိသားစုတွေ live လွှင့်ခဲ့ပြီး ပရိသတ်တွေနဲ့ စကားပြောခဲ့ကြတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဒီ live လေးကိုတော့ ပြင်လွင်ဦးက သူတို့အိမ်မှာနေရင်း လွှင့်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး သားဖိုးဓီနဲ့ သမီးကြီး သုသု တို့လည်း ပါဝင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ မိနစ် ၃၀ နီးပါးလွှင့်ခဲ့တဲ့ သူတို့ရဲ့ မိသားစု Live လေးကိုတော့
ပဌာန်းအကျယ် မရွတ်နိုင်တဲ့ နေ့တွေမှာ သရဏဂုံသုံးပါးနှင့် ငါးပါးသီလ စောင့်တည် ပြီး ဒါလေးကို ရွတ်ဆိုနိုင်ပါတယ် အရမ်း အချိန်ပေးစရာမလိုဘဲ မြတ်စွာဘုရားရှင် ပဌာန်းဒေသနာတော် အား ဆုတောင်းနည်းပါ ပဌာန်းအကျယ်ရွတ်ဖို့ အရမ်း အချိန်မပေးနိုင်တဲ့ နေ့တွေမှာ ဒါလေး နေ့စဉ် ရွတ်ဖြစ်ပါတယ် ကြာသွားရင်အလွတ် ရသွားတော့ အမြဲ အာဂုဏ်စောင့်မိတဲ့ အတွက် နေ့စဉ် ကိုယ့်အတွက် ကံဆိုးမှုတွေ မကျရောက်နိုင်ပါဘူး လက်တွေ့ပါ ​ကောင်းမှုတွေ​ကြောင့်​ ​ကောင်းကျိုးမင်္ဂလာတည်​ရှိပါ​စေ 1. ဟေတု ပစ္စယော : အကုသိုလ်ကင်း၍ ကုသိုလ်နှင့် ယှဉ်တွဲရပါစေသား။ 2. အာရမ္မဏ ပစ္စယော : မျက်စိနှင့်နားတို့သည် နိဗ္ဗာန်သို့ မျက်မှောက်ပြုရပါစေသား။ 3. အဓိပတိ ပစ္စယော : ရုပ် ၊
Myanmar Idol Season3ဆန်ခါတင် ပြိုင်ဝင်များနှင့် ပရိသတ်များ တွေ့ဆုံပွဲ Myanmar Idol Season3သီချင်းဆို ပြိုင်ပွဲရဲ့ နောက်ဆုံး ဆန်ခါတင် ပြိုင်ပွဲဝင် ၁၁ ဦးထဲမှ ကျန်ရှိသော ပြိုင်ပွဲဝင် ၈ ဦးနဲ့ ပရိသတ်များ တွေ့ဆုံပွဲကို ယနေ့ ဇွန်လ ၂၄ရက်နေ့၊ ရန်ကုန်မြို့ မြန်မာပလာဇာမှာ ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ယနေ့ တွေ့ဆုံမှုမှာတော့ ဆန်ခါတင် ပြိုင်ပွဲဝင် ၈ ဦးထဲမှ ၇ ဦးသာ လာရောက်ခဲ့ပြီး ပရိသတ်များနဲ့ ရင်းနှီးစွာတွေ့ဆုံခဲ့ပြီး ပရိသတ်ရဲ့ မေးမြန်းမှုများကိုလည်း ပြန်လည်ဖြေဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ Myanmar Idol season3ရဲ့ ပြိုင်ပွဲဝင် အဆိုရှင်များကတော့ တေးသီချင်း အမျိုးမျိုးနဲ့
ဖြိုးမြတ်အောင်က ပရိတ်သတ်အားပေးမှု အများဆုံး ရရှိထားသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး Winner ဖြစ်နိုင်ခြေ ၅ဝ ရာခိုင်နှုံးကျော် ရှိသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့ အော်ရီဒူးက ပြုလုပ်တဲ့ မြန်မာပလာဇာ ဒုတိယထပ်က ပရိတ်သတ်နဲ့ တွေ့ဆုံပွဲမှာ ဖြိုးမြတ်အောင်က ပြောသွားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Credit;PannPwint ===================== ဖွိုးမွတျအောငျက ပရိတျသတျအားပေးမှု အမြားဆုံး ရရှိထားသူတဈယောကျဖွဈပွီး Winner ဖွဈနိုငျခွေ ၅ဝ ရာခိုငျနှုံးကြျော ရှိသူလညျးဖွဈပါတယျ။ ဒီနေ့ အျောရီဒူးက ပွုလုပျတဲ့ မွနျမာပလာဇာ ဒုတိယထပျက ပရိတျသတျနဲ့ တှဆေုံ့ပှဲမှာ ဖွိုးမွတျအောငျက ပွောသှားတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ Credit;PannPwint
ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ လင်ယောင်္ကျားကို ပိုင်ဆိုင်ချင်ရင် ဒီလိုအချက်တွေ ရှိဖို့ပဲ လိုပါတယ်။ ခွဲထွက်ပါ မြင်တွေ့ နေကျ အခြား သာမန် မိန်းမ အမျိုးအစား အဖြစ်မှ ပြောင်းလဲလိုက်ပါ။ တစ်နေကုန် ဈေးဝယ်ထွက်နေရလျှင် ပျော်ရွှင်နေသည့်ပုံစံ မဖြစ်သင့် ။ အဘယ့်ကြောင့်နည်း မိမိသည် သုံးဖြုန်းတတ်သော အပျော်ကြူးသူ မစေ့စပ်မသေချာသူ အဖြစ်မခံပါနှင့် ။ သမရိုးကျသော အဖွဲအစည်းမှ သီးခြား ခွဲထွက်လိုက်ပါ ။ အခြားသူနှင့်ကွဲထွက်သော အမူအကျင့် အပြုအမူ တစ်ခုပင်လျှင် ရာသက်ပန် အိမ်ထောင်ဖက် အဖြစ် မြင်စေနိုင်ပါသည် ။ မိမိကိုယ်ကို တန်ဖိုးမြှင့်တင်ပါ မိမိသည် မည်သူမည်ဝါ ဖြစ်နေပါစေ ၊ မိမိကိုယ်ကို တန်ဖိုးထား တတ်ပါစေ။ အမျိုးသားများသည် မိမိကိုယ်ကို တန်ဖိုးထားသော အမျိုးသမီးများအား အထင်ကြီး
ကဲ..ဘယ်လို လုပ်ကြမလဲ.. ဒါဟာ Child Abuse ပါပဲ.. Share လုပ်ပေးရင် သူတို့ကိုမြန်မြန်ကူညီရာရောက်မယ် ကိုယ့်ကို အားကိုးပြီး ကူညီပါဆိုလာတဲ့ ညီမလေး ခိုင်ဝတ်ရည်အောင်ကို အမြန်ဆုံး ဒီနည်းနဲ့ပဲ..ကူညီလိုက်ပါတယ်.. လှည်းတန်းစင်တာရှေ့မှာပါ ကျွန်မမီးပွိုင့်မိတုန်းသတိထားမိတာပါ မိုးရေထဲမှာအဲ့ကလေး၂ယောက် ဒီတိုင်းဆိုသေကုန်ပါလိမ့်မယ် ကျွန်မဆင်းပြီး အမိုးအောက်ထဲဝင်နေဖို့ပြောပါတယ် ပုံထဲမှာကွယ်နေလို့ပါ အပြင်မှာသူတို့ရှေ့မှာပိုက်ဆံတောင်းတဲ့ရေပုံးလေးရှိပါတယ် အဲ့နားထိုင်နေတဲ့ဘယ်သူမှ မိုးတွေဒီလောက်ရွာနေတာ အဲ့ကလေး၂ယောက်ကိုအမိုးထဲဝင်ဖို့မပြောကြပါဘူး ကျွန်မတို့တွေ အဲ့လောက်မေတ္တာတရားခေါင်းပါးကုန်ကြပြီလားရှင့် ကျွန်မဆင်းသွားပြီး အမိုးထဲဝင်နေဖို့ပြောတော့ သူတို့ကမဝင်ရဲပါဘူး ဘယ်သူကဒီမှာနေခိုင်းတာလဲ အဲ့လိုနေခိုင်းတာဘယ်သူလဲ မေးတော့ ဟိုဘက်ခြမ်းမှာပိုက်ဆံတောင်းနေတဲ့မိန်းမလို့ပြောပါတယ် ကျွန်မရှာကြည့်ပါသေးတယ် မတွေ့ပါ သူတို့အမိုးထဲဝင်ရင်အရိုက်ခံရမယ်ပြောပါတယ် ကျွန်မလည်းမီးစိမ်းတာနဲ့ဘာမှဆက်လုပ်မရပဲဆက်ထွက်လာရပါတယ် ကျွန်မထွက်အလာဘေးနားကယောကျာ်းတစ်ယောက်ကတော့အမိုးထဲဝင်နေဖို့ဆက်ပြောနေပါတယ် ကျွန်မကြံရမရတာနဲ့ ကမာရွတ်ရဲစခန်းကိုဖုန်းလှမ်းဆက်တော့ သူတို့လူလွှတ်ကြည့်ခိုင်းပါ့မယ်တော့ပြောပါတယ် ကျွန်မအလုပ်တစ်ခုအရေးကြီးတာရှိနေလို့အချိနိမရတာနဲ့သာထွက်လာရတာပါ ကျွန်မစိတ်ထဲဘယ်လိုမှနေမဖြစ်ပါဘူး ကလေး၂ယောက်ပတကယ့်ကိုပိန်ပိန်လှီလှီလေးတွေပါ အောက်ကအိပ်နေတဲ့ကလေးဆိုလှုပ်နိုးမေးတာတောင်မလှုပ်ပါဘူး ကျွန်မကူညီနိင်တာဆိုဘာမဆိုကူညီပါမယ် ကိုယ်တိုင်လည်းကလေး၂ယောက်အမေမို့ ရင်ထဲနေလို့မထိပါဘူး ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့် ဆိုင်ရာပိုင်ရာများ ဆက်လက်